explosive - Synonyms of explosive | Antonyms of explosive | Definition of explosive | Example of explosive | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for explosive
Top 30 analogous words or synonyms for explosive
လက်ပံတောင်းတောင်အစီရင်ခံစာ ၅၉။ စံပယ်တောင်၊ စံပယ်တောင်(တောင်)မှ ကြေးနီသတ္တုစင် ထုတ်လုပ်မှုမှာ မြန်မာ-အိုင်ဗင်ဟို ကြေးနီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar Ivanhoe Copper CompanyLimited - MICCL) ၏ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများကို (Cut-off Date) အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် ၃၁-၁၂-၂၀၁၀ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက် Myanmar Economic Holdings Limited- MEHL နှင့် (Wanbao Mining Limited) ၏ ကုမ္ပဏီခွဲ ဖြစ်သော (Myanmar Yang Tse Copper Co., Ltd.) တို့က တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အဓိက လိုအပ်လျက်ရှိသည့် (Diluent,HSD, Sulphuric Acid) နှင့် (Explosive) များကို အမြန် ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပြီး ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့ရာ ၅-၂-၂ဝ၁၁ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ကြေးနီသတ္တုစင်( Cathode Copper) များ စတင်ထွက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ စုစုပေါင်း (Cathode Copper) ၂၂၁၇၄ ဒဿမ ၁၁ တန် ထုတ်လုပ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
ဆေတန် ၅ ဒုံးပျံ In the event of an abort requiring the destruction of the rocket, the range safety officer would remotely shut down the engines and after several seconds send another command for the shaped explosive charges attached to the outer surfaces of the rocket to detonate. These would make cuts in fuel and oxidizer tanks to disperse the fuel quickly and to minimize mixing. The pause between these actions would give time for the crew to escape using the Launch Escape Tower or (in the later stages of the flight) the propulsion system of the Service module. A third command, "safe", was used after the S-IVB stage reached orbit to irreversibly deactivate the self-destruct system. The system was also inactive as long as the rocket was still on the launch pad.
တီ-၉၀ ပထမအဆင့်- Composite Armour ၊ ဒုတိယအဆင့်- တတိယမျိုးဆက် Kontakt-5 ERA (Explosive Reactive Armour)၊ တတိယအဆင့်- Shtora-1 “curtain” Countermeasures Suite စသည်ဖြင့် အဆင့်(၃)ဆင့်ပါ Three Tiered Protection System ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ERA စနစ်နှင့် Composite Armor တွေတပ်ဆင်ထားသော်လည်း အလေးချိန်မှာ ပုံမှန် Steel-only Armor အလေးချိန်ခန့်သာ ရှိပါတယ်။ Shtora-1 ဟာ မိမိ၏ တင့်ကားကို ရန်သူ့လေဆာလမ်းညွှန်စနစ်/ပစ်မှတ်ရှာစနစ်တို့မှ ထောက်လှမ်းသည်တွေ့ရှိပါက တင့်အဖွဲ့သားများကို ချက်ချင်း သတိပေးပြီး၊ အမြောက်တပ်သားကို ၎င်းပစ်မှတ်အားပစ်ခတ်နိုင်စေရန် အမြှောက်ဆုံလည်ကို အလိုအလျောက် လှည့်လည် ချိန်ရွယ်ပေးသည်။ ပစ်မှတ်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်ကိုသိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် မီးခိုးဗုံးပစ်လောင်ချာများကို အလိုအလျှောက်ပစ်ခတ်စေ၍ မီးခိုးမှိုင်းကာချစနစ်ကို ပြုလုပ်ပါတယ်။ Infrared Jammer မှလည်း အနီအောက်ရောင်ခြည် ပဲ့ထိန်းဒုံးပျံများကို Jam လုပ်၍ လမ်းလွှဲပေးနိုင်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ၏ T-90S များတွင် Shtora-1 စနစ်မပါဝင်ပဲ LEDS-150 Land Electronic Defence System ကိုပြောင်းလဲတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုများအရ T-90 ဟာ အမျိုးမျိုးသော RPG, ATGM, APFSDS စသည့်လက်နက်များဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုတွင် T-90 ကို RPG (၇)ချက်ထိမှန်သော်လည်း ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ခြင်းမရှိပဲ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထပ်မံ၍ T-90 ကို Nuclear, Biological & Chemical (NBC) Protection Equipment များ၊ အလိုအလျောက် မီးငြိမ်းသတ်စနစ် စသည်များတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ မိမိတင့်မရောက်မီ သံလိုက်မိုင်းများကို ကြိုတင်Disable လုပ်နိုင်သည့် (EMT-7) Electromagnetic-counter Mine System ကိုလည်းတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ မိမိ၏တင့်ကားကို Infrared, Thermal, Radar-Thermal, and Radar bands တို့နှင့် Detect လုပ်နိုင်ချေကို လျှော့ချ ပေးနိုင်တဲ့ Nakidka Signature Reduction Suite ကိုလည်း တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
ဗွီ-၁ ဗုံးပျံ There were plans, not put into practice, to use the Arado Ar 234 jet bomber to launch V-1s either by towing them aloft or by launching them froma"piggy back" position (in the manner of the "Mistel", but in reverse) atop the aircraft. In the latter configuration,apilot-controlled, hydraulically operated dorsal trapeze mechanism would elevate the missile on the trapeze's launch cradle some eight feet clear of the 234's upper fuselage. This was necessary to avoid damaging the mother craft's fuselage and tail surfaces when the pulse jet ignited, as well as to ensurea'clean' airflow for the Argus motor's intake. A somewhat less ambitious project undertaken was the adaptation of the missile asa'flying fuel tank' "(Deichselschlepp)" for the Messerschmitt Me 262 jet fighter, which was initially test-towed behind an He 177A "Greif" bomber. The pulse-jet, internal systems and warhead of the missile were removed, leaving only the wings and basic fuselage, now containingasingle large fuel tank. A small cylindrical module, similar in shape toafinless dart, was placed atop the vertical stabilizer at the rear of the tank, acting asacentre of gravity balance and attachment point foravariety of equipment sets. A rigid tow-bar withapitch pivot at the forward end connected the flying tank to the Me 262. The operational procedure for this unusual configuration saw the tank resting onawheeled trolley for take-off. The trolley was dropped once the combination was airborne, and explosive bolts separated the towbar from the fighter upon exhaustion of the tank's fuel supply. A number of test flights were conducted in 1944 with this set-up, but inflight "porpoising" of the tank, with the instability transferred to the fighter, meant the system was too unreliable to be used. An identical utilisation of the V-1 flying tank for the Ar 234 bomber was also investigated, with the same conclusions reached. Some of the "flying fuel tanks" used in trials utilisedacumbersome fixed and spatted undercarriage arrangement, which (along with being pointless) merely increased the drag and stability problems already inherent in the design.